Okwu Amilcar Cabral - Afrikhepri Fondation
wednesday, ka 12, 2021
Okwu Amilcar Cabral
JA ga m agwa gị n ’ụzọ dị n’ oge dị ka o siri dị gbasara ọnọdụ anyị, ọnọdụ anyị yana ọ bụrụ n’ịchọrọ nhọrọ anyị. Ntụle dị mkpirikpi anyị ga-achọ ime n'ụzọ ebumnuche, na-enweghị agụụ. N'ezie, ọ bụrụ na anyị anaghị echefu echiche nke akụkọ ihe mere eme nke isi ihe mere na ndụ mmadụ, ọ bụrụ na anyị na-akwanyere nkwanye ùgwù anyị ji ụgwọ nkà ihe ọmụma niile, anyị echefughị ​​na ụwa bụ okike nke nwoke n’onwe ya, a pụrụ iwere colonialism dị ka ahumkponwu ma ọ bụ ntụgharị, ma ọ bụ ọbụna ịkwụsị akụkọ ntolite nke ndị mmadụ na-akwado mmepe nke akụkọ ihe mere eme nke ndị ọzọ. Nke a bụ ya mere na -ekwu maka Portuguese colonialism anyị ekwesịghị iwepu ya site na ndị ọzọ niile phenomena nke e ji mara ndụ mmadụ site na mgbanwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe, site na ọbịbịa nke ikeketeorie ruo Agha Secondwa nke Abụọ.
Nke a bụ ihe kpatara na mgbe anyị na-ekwu maka ọgụ anyị na-agba, anyị agaghị ewepu ya na ihe niile emere mmadụ ndụ, ọkachasị Africa mgbe Agha Secondwa nke Abụọ gasịrị. Echetara m oge ahụ nke ọma. Anyị na-amalite ịka nká.
Echetara m nke ọma na, na Lisbon, ka ụmụ akwụkwọ, ụfọdụ n'ime anyị zukọtara, na-emetụta oke mmiri nke ụwa, ma bido ịkọwa otu ụbọchị ma ọ bụ ọzọ gbasara ihe anyị nwere ike ịkpọ taa reafricanization nke uche anyị. Ee, ụfọdụ n'ime ha nọ n'ime ụlọ a. Na nke ahụ, ezigbo ndị enyi, bụ mmeri dị egwu megide ike dị n'azụ nke ọchịchị Portuguese.
Enwere m n'etiti gị Agostinho Neto, Mario de Andrade, Marceline Dos Santos, ị nwere n'etiti gị Vasco Cabrai, otu n'ime gị bụ Dr. Mondlane.
Anyị niile nọ na Lisbon, ụfọdụ na-adịgide adịgide, ndị ọzọ nwa oge, amalitela njem a, nke ga-abụrịrị ogologo ije maka nnwere onwe nke ndị anyị.
N'oge a na-alụ Agha IIwa nke Abụọ, nde ndị nwoke, ndị nwanyị na ụmụaka, nde ndị agha nyere ndụ ha maka ezigbo, ezigbo ọchịchị onye kwuo uche ya, nnwere onwe, ọganihu, ndụ ziri ezi maka mmadụ niile ụmụ nwoke.
O doro anya na anyị maara. na Agha IIwa nke Abụọ sitere na esemokwu ndị bụ isi na ogige nke alaeze ukwu n'onwe ya.
Mana ọzọ, anyị matara na otu ebumnuche bụ isi nke agha a nke Hitler na ndị agha ya malitere bụ ibibi ogige ndị na-elekọta mmadụ.
Anyị makwaara na n'ime obi nwoke ọ bụla lụrụ agha a, olileanya, olile anya maka ụwa ka mma dị. Ọ bụ olile anya a emetụla anyị niile aka, na-eme ka anyị bụrụ ndị ọgụ, ndị ọgụ maka nnwere onwe nke ndị anyị.
Mana ekwesịrị ikwu ya n'ihu ọha na ọ bụkwa, ma ọ bụ karịa ike, ọnọdụ doro anya nke ndụ ndị anyị: nhụsianya, amaghị ihe ọ bụla, nhụjuanya nke ụdị dị iche iche, nchụpụ zuru oke nke ikike izizi anyị nwere kwuru
eguzogide megide colonialism nke Portuguese na, n'ihi ya, megide ikpe na-ezighị ezi niile n'ụwa.
Anyị ezutewo ọtụtụ oge, anyị emeela ọtụtụ òtù. Naanị m ga-echetara gị otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a: Anti-Colonialist Movement, MAC.
Otu ụbọchị, anyị ga-ebipụta ama ama, maka anyị ngosipụta ama ama na nke akụkọ ihe mere eme nke MAC, nke ị ga-ahụ n'ezie okwu mmalite nke mgba anyị, usoro nke ọgụ anyị na-alụ taa mmeri megide Portuguese colonialism. Anyị na-alụ ọgụ megide ọchịchị ndị Portuguese. Na mgba ọ bụla ọ dị mkpa ịkọwapụta n'ụzọ doro anya onye anyị bụ, onye iro ahụ.
Anyị, ndị bi na Portuguese, anyị bụ ndị Africa nke Africa a nke ndị ọchịchị na colonialism na-elelị ruo ọtụtụ iri afọ na ụfọdụ ruo ọtụtụ narị afọ. Anyị bụ akụkụ Africa nke ndị isi ala kpọrọ Black Africa.
Ee, anyi bu ndi oji. Ma anyi bu ndi mmadu dika ndi ozo. Mba anyị bụ mba na-ala azụ. Ndị anyị dị na
akuko omuma ihe omuma a bu ihe omuma a.
Anyị kwesịrị ịmara nke a. Anyị bụ ndị Afrịka, anyị echepụtaghị ọtụtụ ihe, taa anyị enweghị ngwa agha pụrụ iche nke ndị ọzọ nwere, anyị enweghị nnukwu ụlọ ọrụ, anyị enweghị ụmụ anyị, ihe eji egwuri egwu ụmụaka ndị ọzọ nwere, mana anyị nwere obi anyị, isi anyị, akụkọ ihe mere eme anyị.
Ọ bụ akụkọ a ka ndị colonialist naara anyị, ndị colonialist na-ekwu na ha mere ka anyị banye na akụkọ ntolite.
Taa, anyị ga-egosi na ee e: ha wepụrụ anyị na akụkọ ntolite, site na akụkọ nke anyị, soro ha n'ụgbọ oloko ha, na njedebe, na ụgbọ oloko nke akụkọ ntolite ha.
Taa site na iwere ngwa ọgụ iji wepụta onwe anyị, site na isoro ihe atụ nke ndị ọzọ ndị buliri ngwa agha iji nwere onwe ha, anyị chọrọ n'ụkwụ anyị, ụzọ nke anyị na onyinye anyị iji laghachi na akụkọ ntolite anyị. Anyị, ndị bi n’Africa, ndị na-alụ ọgụ megide ọchịchị ndị Portuguese, atawo ahụhụ ọnọdụ pụrụ iche, n’ihi na n’ime afọ iri anọ gara aga, anyị etinyela n’okpuru ọchịchị onye fasizim.
Know maara nke ọma ihe nke ahụ pụtara. N'ụlọ, site na Cape Verde ruo Mozambique, site na San Thomé ruo Angola, anyị enwetụbeghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, njikọ azụmahịa ma ọ bụ nnwere onwe ndị ọzọ. Nke a bụ ihe na-egosi ọnọdụ anyị n'ụzọ bụ isi, na-egosipụta ya na nke ndị Africa ndị ọzọ lụrụ ọgụ megide colonialism.
Ọ bụ n'okpuru ọnọdụ ndị a, n'agbanyeghị mmachibido iwu niile dịka onye ọrụ ibe anyị si National Union of Workers of Guinea si kọọ na anyị nwere
bidoro mgba mgba nzuzo anyị, ọ bụ n'ọnọdụ ndị a mere ka anyị nwee ike ime ka mbọ anyị, aja anyị, bulie ngwa ọgụ ma taata ka anyị nọrọ ebe a iji wusie ike ịhazi ihe anyị mere maka usoro ikpeazụ nke mgba anyị na-alụ megide colonialism Portuguese.
Dika ndi mmadu nile no n'uwa, anyi choro ibi n'udo, anyi choro ime udo, anyi choro iwuli ndi mmadu.
Dị ka mmadụ niile nke ụwa, anyị nwere ikike inupụ isi megide ọchịchị mba ọzọ. Dị ka mmadụ niile nke ụwa taa, anyị nwere ihe ndabere iwu kwadoro maka nnupụisi, iji nweta ikike anyị, anyị nwere Akwụkwọ Iwu nke United Nations. Ma oburu na akwukwo nke United Nations ezughi, ma oburu na United Nations n'onwe ya ezughi oke, ndi mmadu anyi ezuola igbapu rue mgbe ebighi ebi, site na aja ha na-achu kwa ubochi, Portuguese colonialism si ala nke ala nna anyi.
Isnye bụ onye iro a na-achị anyị, onye na-ekwusi ike ka ọ chịkwaa anyị, na-enupụrụ iwu niile, iwu na omume mba ụwa anya taa?
Onye iro a abụghị ndị Portuguese, ọbụnadị Portugal n'onwe ya: maka anyị, ndị na-alụ ọgụ nnwere onwe nke ndị Portuguese, onye iro a bụ Portuguese colonialism nke ndị ọchịchị fascist nke Portugal na-anọchi anya ya.
Mana o doro anya na gọọmentị bụkwa n'ụzọ esi na akụkọ ihe mere eme, ọnọdụ ala na akụ na ụba nke mba ọ na-achị.
Portugal, ezigbo ndị enyi, bụ mba na-azụ azụ na akụ na ụba, ọ bụ obodo ebe ihe dịka 50% nke ndị bi na ya amaghị akwụkwọ, ọ bụ mba na ọnụ ọgụgụ niile maka Europe ị ga-ahụ ebe ikpeazụ.
Ọ bụghị ihe kpatara ndị Portuguese ndị, n'otu oge n'akụkọ ihe mere eme, maara otu esi egosi ịdị mkpa ha, obi ike ha, ikike ha na ndị, ọbụlagodi taa, nwere ụmụ ruru eru, ụmụ ezi omume, ụmụaka. ndị na-achọ inwetaghachi nnwere onwe na obi ụtọ nke ndị ha.
Pọtugal bụ obodo nke enweghị ọnọdụ ọ bụla na-enye ya ohere ịchị mba ọzọ, Pọtugal abịakwute anyị na-ekwupụta na ọ na-abịa maka ijere Chineke ozi na maka mmepeanya.
Taa, anyị na-aza ya aka na aka: ihe ọ bụla Chineke nọnyeere ndị Portuguese colonialists, ihe ọ bụla mmepeanya ndị Portuguese colonialists na-anọchi anya, anyị na-aga ibibi ha n'ihi na anyị ga-ebibi n'ụlọ ọ bụla ụdị ọchịchị mba ọzọ. . Agaghị m ekwusi ike na njirimara nke colonialism Portuguese. Ihe e ji mara Portuguese colonialism taa bụ eziokwu dị mfe: Portuguese colonialism, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ, akụrụngwa akụ na ụba Portuguese, enweghị ike ị nweta okomoko nke neocolonialism. Ọ bụ site na nke a ka anyị nwere ike ịghọta omume niile, isi ike niile nke Portuguese colonialism n'ebe ndị anyị nọ.
Ọ bụrụ na Portugal nwere mmepe akụ na ụba dị elu, ọ bụrụ na enwere ike ịkọwa Portugal dị ka mba mepere emepe, anyị agaghị agha Portugal ugbu a!
Mana ọtụtụ ndị na-akatọ Salazar, na-ekwu okwu ọjọọ banyere Salazar. Ọ bụ nwoke dị ka onye ọ bụla ọzọ. O nwere ọtụtụ ntụpọ, ọ bụ onye fascist, anyị kpọrọ ya asị, mana anyị anaghị alụ ọgụ megide Salazar, anyị na-alụ ọgụ megide usoro ndị ọchịchị Portuguese. Anyị anaghị atụ egwu na nrọ mgbe Salazar ga-apụ n'anya Portuguese colonialism ga-apụ n'anya.
Yabụ, na ndabere nke njirimara a enweghị ike nke Portugal ịme neocolonialism, gọọmentị Portuguese ajụla ịnakwere oku ọ bụla maka nghọta n'aka anyị, gọọmentị Portuguese siri ọnwụ na ọ ga-ebute n'ụlọ, na Guinea kwuru. Portuguese, Angola, Mozambique, na ọ dị njikere ime ya na ndị ọzọ chịrị, agha colonial ọhụrụ megide Africa, megide ụmụ mmadụ.
Anyị, ndị udo ma nwee obi ụtọ maka nnwere onwe anyị nwere nnwere onwe, na-enwe obi ụtọ maka mgbakwunye anyị na echiche nke ọganihu na narị afọ nke iri abụọ a, anyị ejirila mkpebi siri ike, anyị eburula ngwa agha iji chebe ikike anyị, nyere na ọ dịghị iwu dị n’ụwa nke nwere ike imere anyị nke a. Naanị m chọrọ ịdọrọ uche gị n'eziokwu ahụ bụ na anyị bụ ndị udo, anyị achọghị agha, mana agha, ọgụ ọgụ maka nnwere onwe mba bụ naanị ụzọ anyị ga-esi hapụ ọchịchị Portuguese ka anyị nwetaghachị ugwu nke ndi Africa, ugwu mmadu. Anyi choro ikwu na anyi aghaghi ikele ndi ochichi Portuguese maka nke a.
Ee, ọ gụnyere ịchụ ọtụtụ ihe n’àjà, ma ọ metụtara ọtụtụ ihe maka ndị anyị. Anyị abụghị ndị na-ekpo ọkụ na m na-ekwughachi, anyị anaghị amasị agha, mana anyị na-ahụ taa, na ihe atụ bụ n'ozuzu ya, na ịlụ ọgụ maka nnwere onwe mba na-emepụta ọnọdụ dị mma maka ọdịnihu n'efu. nke ụfọdụ mgbochi, na ọ nwere ike inye aka na mmepe uto nke nghọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ọbụna ụmụaka.
Ya mere, ebe ọ bụ na Portugal etinyela aka agha nke anyị na-agbaso ọgụ anyị na-alụ maka ịtọhapụ mba, anyị aghaghị ịma otu esi enweta ọnọdụ a, site na nrụgide a, uru niile.
Ma mgba anyị ji alụ ọgụ maka nnwere onwe mba nwere nnukwu ihe ọ pụtara nye Africa yana ụwa niile.
Anyị nọ n’ịchọpụta, n’inye ihe akaebe na ndị na-ala azụ n’ihe gbasara akụ na ụba dị ka nke anyị, oge ụfọdụ na-ebi n’ime ohia ihe fọrọ obere ka ọ gba ọtọ, n’amaghị etu esi agụ ma ọ bụ ede, ọbụnadị ịmatacha data data nke oge a, nwere ike , site na àjà na mgbalị ha, iji merie onye iro ọ bụghị naanị na teknụzụ tozuru oke mana ike ndị ike nke ndị isi ala na-akwado ụwa.
N'aka nke ọzọ, n'ihu ụwa na n'ihu Africa, anyị na-ajụ: ndị Portuguese ziri ezi mgbe ha kwuru na anyị bụ ndị a na-ezighi ezi, ndị mmadụ na-enweghị ọdịbendị?
Anyị na-ajụ: kedu ihe ngosipụta kachasị dị omimi nke mmepeanya na ọdịbendị ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke ndị mmadụ na-eburu ngwa agha iji chebe ala nna ha, ịgbachitere ikike ha maka ndụ, inwe ọganihu, ọrụ na ọ toụ?
Anyị ga-amarịrị, anyị, ndị nnwere onwe nnwere onwe nke mba jikọtara na CONCP, na ọgụ anyị bụ naanị otu akụkụ nke ọgụ izugbe nke ndị a na-emegbu emegbu megide ọchịchị alaeze, nke mgba nke mmadụ maka ugwu ya. , maka nnwere onwe na maka ọganihu. Ọ bụ n'ime usoro a ka anyị ga-enwe ike ijikọ mgba anyị. Anyi aghaghi ihu onwe anyi dika ndi agha, otutu oge ndi amaghi, mana ndi agha nke mmadu n’agha a di ike nke bu Africa taa.
Anyị nke CONCP na-alụ n'Africa n'ihi na Africa bụ ala nna anyị mana anyị ga-adị njikere, anyị niile, ịga ebe ọ bụla ịlụ ọgụ maka ugwu mmadụ, maka ọganihu mmadụ , maka obi ụtọ mmadụ.
Ọ bụ n'ụkpụrụ a ka anyị ga-enwe obi ike, ma n'oge ogbako a ma ebe ọ bụla, iji kwusaa, ma kpọsaa n'olu dara ụda, nhọrọ anyị bụ isi, nhọrọ anyị maka mmadụ.
N'aka nke ozo, anyi aghaghi ima ka esi akowaputa onodu anyi n'ihe banyere ndi mmadu, n'ihe gbasara Afrika, na nke uwa. Anyị ga-eme ya, anyị nwere ike ikwugharị onwe anyị na Nzukọ anyị, mana m nwere ike ịgwa gị ebe a: anyị, site na CONCP, anyị na ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe, anyị na-alụ ọgụ maka nnwere onwe nke ndị anyị niile mana anyị anaghị alụ ọgụ nanị itinye ọkọlọtọ na mba anyị ma nwee ukwe. Anyị, nke CONCP, chọrọ na na mba anyị ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ha kemgbe ọtụtụ narị afọ, na-akparị, na-akparị, na na mba anyị enweghị mkparị nwere ike ịchị, nakwa na ndị mmadụ agaghịkwa erigbu ndị ọzọ ọ bụghị naanị site n'aka ndị ọchịchị, ọ bụghị naanị site na ndị Europe, ọ bụghị naanị ndị mmadụ si
akpụkpọ ahụ dị ọcha, n'ihi na anyị adịghị agwakọta mmegbu ma ọ bụ ihe nrigbu na agba nke akpụkpọ nwoke; anyị achọghịkwa nrigbu ọzọ n’ụlọ, ọbụna ndị ojii.
Anyị na-alụ ọgụ iji wuo na mba anyị, na Angola, Mozambique, Guinea, CapVert, San Thomé ndụ nke obi ụtọ, ndụ ebe nwoke ọ bụla ga-asọpụrụ mmadụ niile, ebe a gaghị enye ịdọ aka ná ntị, ebe ọ dịghị onye ga-akọ ọrụ, ebe ụgwọ ọrụ ga-adị mma, ebe mmadụ nile ga-enwe ikike n’ihe nile nke mmadụ wuru, nke e kere maka obi-ụtọ nke mmadụ.
Nke a bụ ihe anyị na-alụ maka. Ọ bụrụ na anyị erughị ebe ahụ, anyị ga-ada ada n'ọrụ anyị, n'ihe mgbaru ọsọ nke ọgụ anyị. Anyị chọrọ ịgwa gị na ihu Africa, anyị nke CONCP, anyị nwere obi ike na ọdịnihu nke Africa. N'Africa n'onwe ya, anyị nwere ihe atụ anyị ga-agbaso ma anyị nwekwara ihe atụ n'Africa nke anyị na-ekwesịghị iso. Africa bu ya mere, taa bara ọgaranya na ihe atụ ma ọ bụrụ na anyị, echi, anyị arara ọdịmma nke ndị obodo anyị anya, ọ bụghị n'ihi na anyị amaghị ya, ọ bụ n'ihi na anyị chọrọ ịrara aka na anyị ga-Ya mere enweghị mgbaghara.
N'Africa anyị bụ maka nnwere onwe nke Afrika niile site na yoke colonial n'ihi na anyị maara na colonialism bụ ngwa nke alaeze ukwu. Ya mere, anyị chọrọ ịhụ ngosipụta niile nke imperialism kpochapụrụ kpamkpam n'ala Africa, anyị nọ na CONCP n'ụzọ siri ike megide neocolonialism n'ụdị ọ bụla ọ na-ewe.
Mgbalị anyị abụghị naanị mgba megide Portuguese colonialism, dị ka akụkụ nke mgba anyị chọrọ inye aka n'ụzọ kachasị dị irè iji chụpụ ndị mba ọzọ na mpaghara anyị ruo mgbe ebighị ebi. Anyị nọ n'Africa maka ịdị n'otu Africa mana anyị nọ maka ịdị n'otu Africa na-amasị ndị Africa. Anyị na-ahụ ịdị n'otu dị ka ụzọ na ọ bụghị ihe mgbaru ọsọ. Dị n'otu nwere ike iwusi ike, nwere ike ime ka ihe mgbaru ọsọ mezuo ngwa ngwa, mana anyị agaghị arara ihe mgbaru ọsọ ahụ ọsọ. Nke a bụ ihe kpatara na anyị anaghị eme ọsọ ọsọ iji nweta ịdị n'otu nke Africa.
Anyị maara na ọ ga-abịa, nwayọ nwayọ, n'ihi mbọ a na-agba nke ndị Africa. Ọ ga-abịa na-ejere Afrịka ozi, na-ejere mmadụ ozi. Anyị kwenyesiri ike, kwenyesiri ike na CONCP, na nkwalite, n'ozuzu ya, nke akụ na ụba anyị, nke ikike mmadụ na omume nke mpaghara anyị ga-enyere aka mepụta ohere mmadụ bara ọgaranya, nke bara ọgaranya, nke maka akụkụ ya ga-enye aka ime ka ụmụ mmadụ baa ọgaranya karịa. Mana anyị achọghị nrọ nke ebumnuche a ka o wee gosipụta ọdịmma nke ndị Africa niile. Dịka ọmụmaatụ, anyị, na Guinea na Cape Verde Islands, anyị na-ekwupụta n'ihu ọha na mmemme nke Party anyị na anyị dị njikere ịdị n'otu na ndị Africa ọ bụla, anyị ga-etinye naanị otu ọnọdụ: na mmeri, ihe ndị anyị rụzuru na mgbapụta nnwere onwe nke mba, mmezu nke akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmezu nke ikpe ziri ezi nke anyị na-agbaso ma anyị ejirila nke nta nke nta na-achọpụta, na ndị a niile adịghị edozi ya. ndị dị iche iche.
Nke a bụ naanị ọnọdụ anyị, maka ịdị n'otu.
Anyị nọ n'Africa maka amụma Africa nke na-ebu ụzọ echebe ọdịmma nke ndị Africa, nke mba ọ bụla n'Africa, kamakwa maka amụma nke na-agaghị echefu ọdịmma ụwa, nke mmadụ niile. . Anyị bụ maka usoro udo na Africa yana nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndị niile, ụwa. N'ụwa nile, anyị na-agbachitere na CONCP 'amụma enweghị nkwekọrịta. Ọ bụ amụma a kachasị mma maka ọdịmma nke ndị anyị n'oge a na akụkọ ntolite anyị. Anyị kwenyesiri ike na nke a. Mana, maka anyị, itinye aka n'agha apụtaghị ịgbanye azụ na isi nsogbu nke mmadụ, na ikpe ziri ezi. Ndabereghị na-atụ anyị ụjọ ka anyị ghara itinye aka na blọk, ọ bụghị iji kwekọọ na mkpebi nke ndị ọzọ. Anyị nwere ikike ikpebiri onwe anyị ma ọ bụrụ na ohere ọ bụla nhọrọ anyị, mkpebi anyị adaba na nke ndị ọzọ, ọ bụghị anyị kpatara ya.
Anyị bụ maka amụma nke enweghị itinye aka mana anyị na-eche na anyị ji obi anyị dum na ndị anyị na-etinye aka na ihe ọ bụla n'ụwa. Anyị na-ahụ onwe anyị dịka akụkụ nke nnukwu ihu n'ọgụ maka ọdịmma nke mmadụ.
Understand ghọtara na 'anyị na-ebu ụzọ eburu agha maka ndị anyị. Nke a bụ ọrụ anyị n'ihu ọgụ a. Nke a gụnyere nsogbu nke ịdị n'otu. Anyị nke CONCP na-agbasi mbọ ike na ịdị n'otu ọ bụla. Nke a bụ ihe kpatara na anyị, FRELIMO, MPLA, PAIGC, CLSTP, nzukọ ọ bụla jikọrọ aka na CONCP, obi anyị na-akụkọta ọnụ na obi nke ụmụnna nọ na Vietnam ndị na-enye otu ihe atụ na-eche ihe ihere kachasị njọ, mmegide na-enweghị mgbagha nke ndị isi ala nke United States of America megide ndị udo nke Vietnam. Obi anyị jikwa nke ụmụnna anyị si Congo ndị nọ na. ohia nke mba Africa a bara ọgaranya ma baa ọgaranya na-achọ idozi nsogbu nke ha n'agbanyeghị mmegide nke ndị ọchịchị na ikike nke ndị ọchịchị na-agagharị na egwuregwu ụmụaka ha. Nke a bụ ihe kpatara na anyị, ndị CONCP, na-eti mkpu n’olu dara ụda ma doo anya na anyị na-emegide Tshombe, megide Tshombe niile dị n’Africa.
Obi anyị soro ụmụnna anyị nọ na Cuba gosipụtakwa na ndị mmadụ, ọbụlagodi mgbe oke osimiri gbara ya gburugburu, nwere ike ịgbachitere, ogwe aka na mmeri, ọdịmma ya bụ isi na ikpebiri onwe ya. nke akara aka ya.
Anyị na ndị ojii nke United States of America, anyị na ha nọ n'okporo ámá ndị dị na Los Angeles, ma mgbe ewepụrụ ha site n'ụzọ niile nke ndụ, anyị na ha ga-ata ahụhụ. Anyị na ndị gbara ọsọ ndụ, ndị gbara ọsọ ndụ n'ihi okwukwe si Palestine, bụ ndị a na-eleda anya, chụpụrụ site n'ala nna ha site na ikike nke alaeze ukwu. Anyị na-eguzo n'akụkụ ndị gbara ọsọ ndụ si Palestine ma anyị na-akwado ike niile nke obi anyị niile nke ụmụ Palestine na-eme iji tọhapụ obodo ha ma anyị ji ike anyị niile na-akwado mba ndị Arab na mba Africa n'ozuzu iji nyere aka ndị Palestian iji nwetaghachi ùgwù ha, nnwere onwe na ikike ndụ.
Anyị na ndị bi na South Arabia, nke a na-akpọ French Somalia (Somali Coast), nke a na-akpọ Spanish Guinea, ma anyị na ụmụnna anyị si Africa nọ n'ụzọ ezi uche dị na ya ma na-egbu mgbu. nke ndị South ndị na-eche ịkpa oke agbụrụ kacha njọ. Anyị ji n'aka nke ọma na mmepe nke mgba na ọchịchị ndị Portuguese, na mmeri anyị na-emeri kwa ụbọchị megide ọchịchị ndị Portuguese, bụ onyinye dị irè iji wepụ ihe ihere, ọchịchị ọjọọ nke ịkpa oke agbụrụ, nke apartheid na South Africa. Anyị ji n'aka na ndị dị ka nke Angola na Mozambique, na anyị onwe anyị na Guinea na Cape Verde, nke dị anya na South Africa, ga-enwe ike igwu egwu, echi, echi: onye, ​​anyị nwere olileanya , agaghị ewepụ, ọrụ dị oke mkpa maka njedebe ikpeazụ nke ikpeazụ bastion nke colonialism, alaeze ukwu na ịkpa ókè agbụrụ na Africa nke dị na South Africa.
Anyị na ịdị n'otu dị na ihe ọ bụla ziri ezi n'ụwa, mana anyị na ndị ọzọ na-ewusi ike. Anyị nwere ezigbo enyemaka nke ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ ndị enyi, ọtụtụ ụmụnna.
Naanị m chọrọ ịgwa gị na anyị, na CONCP, nwere ụkpụrụ bụ isi nke ịdabere, nke mbụ na mbọ anyị, na ịchụ onwe anyị n'àjà. Mana, na ihe doro anya nke ọchịchị Portuguese, ezigbo ndị enyi, na ọkwa nke akụkọ mmadụ ugbu a, anyị makwaara na mgba anyị abụghị naanị nke anyị. Ọ bụ nke Africa niile, ọ bụ nke mmadụ niile na-aga n'ihu.
Nke a bụ ihe mere anyị ji bụrụ ndị CONCP, chere nsogbu ndị siri ike nke mgba anyị ihu, na ihu ọnọdụ akụkọ ihe mere eme ugbu a, anyị maara mkpa ọ dị enyemaka siri ike sitere na. akụkụ nke Africa na mgba anyị, nke ihe enyemaka sitere na ike niile na-aga n'ihu n'ụwa. Anyi na anabata udi enyemaka obula ebe o siri bia, ma anyi anaghi acho onye o bula maka enyemaka anyi choro. Anyị na-echere enyemaka nke mmadụ niile nwere ike iweta na mgba anyị. Nke a bụ ụkpụrụ omume anyị. Anyị chọrọ ịgwa gị na ọ bụ ọrụ dịịrị anyị ikwu ebe a n'ụzọ doro anya na anyị nwere ndị mmekọ nwere nchekwa na mba ndị na-elekọta mmadụ. Anyị niile maara na ndị Africa bụ ụmụnne anyị. Mgbalị anyị bụ nke ha. Ndi mmadu ndi Africa a, obara obara obula nke dara n’etiti anyi, si n’aru na obi umu aka anyi a. Mana anyị makwaara na kemgbe mgbanwe ọchịchị mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mgbe ihe ndị mere na Agha Worldwa nke Abụọ, ụwa agbanweela ihu ya maka mma. Ogige ndị na-elekọta mmadụ bilitere n'ụwa. Nke a gbanwere nguzozi nke ike na ogige ndị a na-elekọta mmadụ taa na-egosi onwe ya ịmara nke ọma ọrụ mba ụwa, akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị omume, ọrụ, n'ihi na ndị mmadụ nke mba ndị na-elekọta mmadụ emebighị ndị ọchịchị.
Ha na egosiputa na ha mara oru ha, ma obu ya mere m ji enwe ugwu n’ebe a igwa unu hoo haa na anyi n’enye aka, enyemaka di ire site na obodo ndia nke bia bia mee ka enyemaka nke anyi n’enye di. ụmụnna anyị ndị Africa. O buru na onwere ndi na achoghi inu ihe a, ka ha bia nyere anyi aka na mgba anyi. Ma ha nwere ike ijide n’aka na anyị ji ọbụbụeze anyị na-eme ọnụ. Anyị ga-ejigide ọnọdụ anyị: anyị na-enweta enyemaka site na mmadụ niile.
Anyị ga-enwetakwa enyemaka nke mba ndị na-elekọta mmadụ na nganga n'ihi na ha na-egosi taa ụzọ nwere ike ijere mmadụ ozi, ụzọ ikpe ziri ezi. N'ime ụlọ a, anyị nwere ndị nnọchi anya mba ndị na-elekọta mmadụ bụ ndị bịara ebe a, dịka ndị enyi, agaghị m atụfu ohere ịgwa ndị nnọchi anya Soviet Union na China, ndị nnọchi anya Yugoslavia na German Democratic Republic, ndị nọ ebe a ndị nnọchi anya mba ndị na-elekọta mmadụ, Achọrọ m ịgwa ha ka ha jiri obi ọma nye ndị ọrụ ha na-anọchi anya ya, ngosipụta nke obi ekele anyị maka enyemaka pụtara ìhè ha na-eweta n'ọgụ anyị. Kedu ihe ndị na-achọghị ịnụ ka anyị na-ekwu na mba ndị na-elekọta mmadụ na-enyere anyị aka?
Ha na enyere Portugal aka, ọchịchị colonialist nke Salazar.
Taa ọ bụghị ihe nzuzo na Portugal, gọọmentị Portuguese, ọ bụrụ na enweghị ya, ọ bụrụ na enweghị ike ịnwe enyemaka ọ na-enweta site na ndị otu NATO, agaghị enweghị ike ibuso anyị agha. Mana, anyi kwesiri ighota ihe NATO putara.
Ee, anyị maara. NATO bu ndi agha nke na akwado ihe ndi West, nke Western Western, wdg. Nke a abughi ihe anyi choro ikwu. NATO bụ mba siri ike, gọọmentị, steeti siri ike.
NATO bụ United States of America. Anyị weghaara ọtụtụ ngwá agha na United States of America. NATO bụ Federal Republic nke Germany. Anyị nwere ọtụtụ égbè Mausers nke ndị agha Portuguese wepụtara. NATO bụ, ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, France. N'ụlọ enwere "Alouettes", helikopta. Mana anyị bidoro ịgba “Alouettes”. NATO ka di n'uzo, ochichi nke ndi mmadu a nwere obi ike ndi nyeworo ihe omuma di otua banyere nnwere onwe, ndi Italiantali.
Ee, anyị were obere egbe na grenade mere na ụlọ mmepụta ihe nke fromtali site na Portuguese.
Mana ọ bụụrụ anyị ezigbo obi ụtọ, na-agba ume ịnụ ka otu enyi si Italytali, nwanne nwoke si Italytali, na-agwa anyị ụdị okwu mara mma na nke ezi obi dị ka nke anyị nụrụ n'ọnụ nwanne anyị nwoke ụnyaahụ onye gwara anyị okwu n'aha Italytali. Achọrọ m ịgwa nwanne anyị nwoke nke kwuru okwu ebe a ụnyaahụ na anyị anaghị emegharị ndị Italiantali na steeti whichtali nke bụ akụkụ nke NATO. Portugal ka nwere ndị ọzọ jikọrọ aka: ọ bụ South Africa, ọ bụ Maazị Smith, si Southern Rhodesia, ọ bụ gọọmentị Franco, ọ bụ ndị ọzọ na-enweghị nghọta na-ezo ihu ha n'ihu ihere nke a na-anọchi anya. Ma, enyemaka a niile gọọmentị nke Salazar na-enweta iji gbuo ndị anyị, gbaa obodo anyị ọkụ na Angola, Mozambique, Guinea, Cape Verde, San Thomé, iji gbuo ndị anyị, enwebeghị ike kwụsị mgba mgbapụta mba anyị. Kama nke ahụ, kwa ụbọchị, ndị agha anyị ka ike.
Gịnị kpatara, ndị enyi m? N'ihi na anyi, n'ihi na ike anyi bu ike ikpe ziri ezi, ike nke oganihu, ike nke akuko; na ikpe ziri ezi, ọganihu, akụkọ ihe mere eme bụ ikike nke ndị mmadụ. Maka na ike anyị bụ ndi anyị. Ọ bụ ndị anyị na-akwado ndị otu anyị, ọ bụ ndị anyị na-achụ onwe ha kwa ụbọchị site na ịzụju mkpa niile nke mgba anyị, mkpa niile nke mgba anyị. O bu ndi mmadu anyi na-ekwe anyi nkwa n’odinihu na nmeri anyi. Ike ọzọ dịịrị anyị: ọ bụ ike nke ịdị n'otu anyị.
Otu na Angola.
Ọ bụ ụgha na enweghị ịdị n'otu na Angola.
Onwe m, abum onye aka-ebe. M na-agbachitere na ndị hụrụ mba n'anya si Angola. N'ime Angola, na Luanda, na North, na South, na East, na West, Ahụtụbeghị m ndị mmadụ kewara n'ihu Portuguese colonialism.
N'ime obodo a, ana m agbara ya akaebe na: Amabeghị nzukọ ọ bụla karịa MPLA. Ee, ezigbo ndị enyi. Enwere ike inwe nkewa nke ndị mba Angolan mana nke ahụ adịghị maka pati anyị, maka anyị nke CONCP, ọ dị naanị na mpụga Angola. Nke a bụ ihe mere ike nke ndị nnọchi anya MPLA na mba ọzọ, nke mere ka isi ike nke nwanne anyị nwoke bụ Dr. Agostinho Neto. Ọ bụrụ na MPLA ejighị n'aka na ndị Angola dị n'otu gburugburu ya, kedụ ka onye ndu nke MPLA ga-esi rụọ ọrụ ebube nke ịme mgbanwe ndị a niile anyị hụrụ n'Africa n'oge na-adịbeghị anya? Kedụ ka MPLA ga-esi duga nzukọ dịka OAU n'onwe ya iji tụleghachi ọnọdụ ya na taa inye MPLA aka n'ụzọ doro anya maka mgbahapụ mgba na Angola?
Anyị na-agwa gị na ike anyị bụ ịdị n'otu: ịdị n'otu na Mozambique, ịdị n'otu e kere n'ime mba ahụ, ịdị n'otu sụgharịrị na mpụga mba ahụ site na otu echiche na-egosipụta ihe niile na-eme n'ime Mozambique na nke nwere oche mpụga ya ebe a FRELIMO. FRELIMO, dabere na ịdị n'otu siri ike ma sie ike nke ndị Mozambican kwa ụbọchị, na-enwe obi ụtọ ịghara iche nsogbu nke ịdị n'otu na mbido ọgụ ya.
Ma onye iro adịghị enwe obi nkoropụ. Onye iro na-amụ anya mgbe niile. Ma n'ime oge mgbe ọgụ Mozambique bidoro ịbawanye ike, ịmanye onwe ya n'Africa na ụwa, anyị na-ahụ ọmụmụ, ebe a na ebe ahụ, nke mmegharị Mozambique pere mpe. Anyị nwere ike ịkwado gị ebe a, na nnọchite nke CONCP, ọkachasị na nnọchite nke Party anyị, na usoro ndị a agaghị enwe mmeri, agaghị agabiga. Anyị ghọtara n'ụzọ zuru ezu ngagharị nke alaeze ukwu. Anyị ghọtara nke ọma atụmatụ aghụghọ niile nke ọchịchị Portuguese. Mana anyị dị njikere, kpebisie ike na anyị agaghị aghọta nke a, obodo ọ bụla na-azọrọ na ọ hụrụ Africa n'anya, hụ mmadụ n'anya, ọganiihu, ikpe ziri ezi, nnwere onwe , nwere ike ịkwado, zụọ, jigide usoro nke ndị Portuguese colonialists na ịmepụta obere mmegharị nke nkewa. Ee, unit ahụ dịkwa na San Thomé.
Ndị obodo San Thomé so na ndị mbụ tara ahụhụ mgbuchapụ site na ọchịchị Portuguese.
Na 1953, n'otu ụbọchị ndị Portuguese colonialists gburu, na February 4 dịkwa ka nke nnupụisi na Angola, na February 4, 1953 na San Thomé, ndị Portuguese colonialists gburu mmadụ 1.000, ndị Africa 1.000, n'ime ndị bi na Mmadụ 60.000.
N'ihi na ha achọghị ido onwe ha n'okpuru, ido onwe ha n'okpuru ọrụ mmanye. Ndị San Thome kwesịrị ka anyị nwee nnukwu nsọpụrụ na mgba a. Ọ bụ obere agwaetiti dị na Gulf of Guinea mana ndị San Thomé nyere anyị ihe atụ mbụ nke nnupụisi megide ọchịchị ndị Portuguese. Ọfọn, ee, m makwaara San Thomé, ndị San Thomé dị n'otu, usoro mmekọrịta niile dị n'otu megide Portuguese colonialism.
Ha bụ ma eleghị anya ọbụna, n'oge ụfọdụ na mmepe nke mgba anyị, ndị kacha nwee ndọrọndọrọ ọchịchị. Anyị kpebisiri ike na CONCP ịghara ikweta na ndị mmadụ nọ n'èzí na-ebi ndụ ha dịka ha chọrọ, na-eje ije, na-etinye oge ezumike ebe ha chọrọ, na-azọrọ na ha bụ ndị isi nke ndị San Thomé, gaa n'ihu ibibi, imebi iwu, igbu oge ọganihu, ọganihu nke mgba nke ndị San Thome. CONCP nwere ike n'oge ụfọdụ iji were ọnọdụ doro anya n'ihe metụtara ikpe Mozambique. Enwere mmegharị, ịnwa imebi ọgụ nke ndị Mozambican site na ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ndị CONCP ji obi ike mara, dịka nwanne anyị nwoke bụ Mondlane kwuru, katọọ ndị a ma wezuga ha n'ọgụ ndị Mozambican. Anyị nwere ike ime ya na ndị ọzọ ọ bụla ma ana m agwa gị ebe a, ọ bụrụ na anyị, nke PA1GC, ọ bụrụ na m onwe m dị ka onye ndu nke PAIGC, echi ị hụrụ m, n'ime CONCP, na-arara ọdịmma nke ndị anyị anya , mee ihe niile iji chụpụ m n'ihi na agaghị m anọnyere gị.
Eeh. Dị n'otu dịkwa na mba a na-akpọ Portuguese Guinea na Cape Verde Islands. Anyị agaghị ekwu ọtụtụ ihe gbasara ya. Kedu otu ọ ga - esi bụrụ na obere ndị mmadụ bi na 800.000 na ndị bi na 200.000 nọ n’agwaetiti, nkewapụrụ site na ihe dị ka narị kilomita ise, olee otu ọ ga - esi bụrụ obere obodo nke 40.000 km2, mba na - emepe emepe, mba nke ndị agha Portuguese 20.000 nọrọ, kedu ka ọ ga - esi kwe omume na mba nke na - enwetụbeghị ahụmahụ nke agha ọgbara ọhụrụ, nke n'aka nke ọzọ kewara agbụrụ, kedu ka ọ ga - esi merie ndị ọchịchị Portuguese ka anyị na-eti ha ihe, iji tọhapụ ihe dịka ọkara nke mba anyị n'otu afọ na ọkara nke ọgụ ọgụ? Olee otú ọ ga-esi kwe omume ime ihe a niile ma ọ bụrụ na anyị adịghị n’otu? Mba, ka anyi ghara igbu oge ikwu banyere ịdị n’otu anyị n’ihi na ihe kacha gosipụta ịdị n’otu nke ndị anyị bi na Guinea na agwaetiti Cape Verde bụ mmeri na-enwu enwu nke mmeri mba anyị.
N'ebe a kwa, e nweela mbọ dị iche iche. Ndị na-enweghị mmasị n'ọgụ anyị ji alụ ọgụ maka nnwere onwe mba ghọrọ ndị iro nke ndị otu anyị ma gbalịa ịmepụta obere nnwere onwe mba na mpụga mba anyị. Ọbụna anyị kere ihu ma dị anya site na mba anyị. Anyị atụleghị, anyị ebipụtaghị akwụkwọ ọ bụla iji lụso obere mmegharị a ọgụ site na mpụga.
Anyị arụ ọrụ n'ime obodo anyị, anyị akpọkọtala ọtụtụ ndị anyị na-ewu ewu, anyị ehiwela ndị ọchịagha n'ọhịa, anyị ejirila ihe niile bara uru nke ndị anyị mee ihe, anyị eburu ngwa agha, anyị nwere hazie obodo, obodo na anyị chere n'ụlọ, ọ bụghị naanị maka usoro ndị agha ma ọ bụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị Portuguese colonial kamakwa ọbịbịa nke mmegharị ahụ sitere n'èzí. Ọ dabara nke ọma na ndị a enweghị oge ịlụ ọgụ, ịlụ ọgụ megide onye ọ bụla ma taa, ngagharị ndị a niile na-agbasasị. Ọ bụghị n'ihi okwu kama ọ bụ n'ihi eziokwu nke obodo anyị. Ọ bụ ya mere ebe a, dịka onye otu CONCP, Party anyị nwere ọrụ ịgwa ụmụnna anyị niile na-alụ ọgụ na mpaghara ndị ọzọ: na ha anaghị egbusi oge ha ịlụ ọgụ na mmegharị nke n'èzí.
Anyi aghaghi ichekwa oge, site na ichikota ndi mmadu kwa ubochi, ndi mmadu a ma ama, site na ibi n'etiti ndi mmadu a ma ama, site n'iso ndi mmadu na-ewu ewu agha, site na ichikota ebe nile na igosi ndi mmadu, na uzo obula. ụbọchị, oge ọ bụla nke bara uru ịlụ ọgụ n'ihi na ọ bụ onye mbụ, naanị ya meriri n'ọgụ ahụ. Ee, anyi aghaghi ikwu okwu, n'aha CONCP na ndi otu anyi, banyere echiche nke mgba anyi. Ndị enyi anyị chọrọ ịma n'ihi na ha chọrọ inyere anyị aka, iji wusie enyemaka ike. Ndị iro anyị chọkwara ịma n’ihi na ha chọrọ imezi atụmatụ ha. Anyị na-agwa gị na na Angola, dịka na Mozambique na Guinea, echiche nke mgba bụ ịzụlite nghọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị anyị kwa ụbọchị.
Ọ bụkwa iji mee ka ịdị n'otu anyị sie ike kwa ụbọchị ma zụlite ọ bụla iji lụso ọgụ ọgụ maka nnwere onwe mba. Mana enwere ndi Cape Verde Islands ndi haziri ma duru anyi na Party n'ihi na anyi, ndi Guinea na Cape Verde Islands, bu ndi mmadu. Ndị ohu si na Guinea bụ Ver Cape Islands bi na Guinea, nke bụ isi, anyị nwekwara otu akara aka, anyị nwere otu asụsụ na anyị nwere otu pati, na Cape Verde Islands atụmanya mgba a bụkwa, ịzụlite kwa ụbọchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọha mmadụ nke rurula ọkwa dị elu iji gafere n'ọzọ ọhụụ nke mgba ahụ.
Anyị na-ekwupụta ebe a n'ihu gị, nke a bụzi ihe mgbaru ọsọ dị nsọ n'ime CONCP, nke anyị na-akwadebe, ndị anyị nọ na Cape Verde Islands na-akwadebe nke ọma ịmalite agha ọgụ megide Portuguese colonialism.
Mee ka ndị colonialist Portuguese mara: anyị ga-amalite ọgụ ọgụ na Cape Verde Islands.
O doro anya na anyị agaghị ekwu ụbọchị na oge awa ọ ga-abụ. Ma anyị ga-eme ya. Mee ka ha mara ma kwadebe onwe ha n'ihi na anyị ji n'aka na ya, yana Batista na ndị ọrụ niile, ndị odibo nke alaeze ukwu, na alaeze ukwu n'onwe ya, enwebeghị enwe ike izere mmeri na Cuba, mmeri nke ndị agha na-aga n'ihu na Cuba.
Anyị, kwa na Cape Verde Islands, ga-ama, na-agbasi mbọ ike nke ndị anyị, ndị taa ahụhụ nke ukwuu na akụkọ ntolite, anyị ga-ama otu esi emeri ndị Portuguese colonialists na chụpụ ha kpam kpam site na ala nke ala nna anyị.
N'ihe banyere mgba anyị, ogbako a na-ewere ọnọdụ n'ụzọ dabara adaba. Understand ghọtara mmasị nke nzukọ anyị.
Anyị ga-eme ka ịdị n'otu anyị sie ike, ọ bụghị naanị na mba ọ bụla kamakwa n'etiti anyị, ndị bi na Portuguese. CONCP nwere ihe pụrụ iche ọ pụtara nye anyị. Anyị nwere otu oge gara aga, anyị niile mụtara ịsụ na ide Portuguese, mana anyị nwere ike siri ike karị, ikekwe karịa akụkọ ihe mere eme: ọ bụ eziokwu na anyị malitere ịlụ ọgụ ọnụ. Ọ bụ ọgụ na mgba na-eme ka ndị agha, nke na-eme ka ndị ibe, nke ugbu a na ọdịnihu. CONCP bụụrụ anyị isi ike mgba.
CONCP dị n’obi onye agha ọ bụla na mba anyị, Angola, Mozambique.
CONCP ga-anọchi anya ya, anyị nwere obi ụtọ na ya, ihe atụ maka ndị Africa.
Maka na anyị nọ n'ọgụ a dị ebube megide ọchịchị alaeze na ọchịchị colonial na Africa, mba izizi ndị gbakọtara iji kwurịta ọnụ, na-emekọ atụmatụ ọnụ, na-amụkọ nsogbu ọnụ gbasara mmepe nke ọgụ ha. Ọ bụ otu ihe ahụ, onyinye na-atọ ụtọ na akụkọ ntolite Africa na n’akụkọ ihe mere eme nke ndị anyị. Anyị enweghị ike idafu ihe niile anyị megoro n'ime usoro nke CONCP ma anyị na-agwa gị ebe a na anyị kpebisiri ike ịpụ na ọgbakọ a na nsonaazụ pụtara. Anyị kpebisiri ike ịpụ ebe a ma bulie mgba anyị na ejiji. Yabụ iji mee ka ngụkọta ngwangwa daa ngụkọta, mmeri niile nke ọchịchị Portuguese na mba anyị.
Taa anyị na-ahụ onwe anyị n'ọgbọ ọhụrụ nke mgba anyị. N'ihu uzo ato, enwere agha nke agha maka nnwere onwe mba. Nke a na-egosi oke ọrụ dịịrị anyị onwe anyị, ma ọ bụ maka otu pati anyị ọ bụla, ma ọ bụ maka CONCP n'ozuzu ya. Mana ọ pụtakwara ibu ọrụ dị ukwuu nye ndị enyi anyị na maka ụmụnna anyị. Afrika aghaghi ilebara nsogbu a anya. Africa na-enyere anyị aka, ee.
Enwere mba ndị dị n’Afrịka na-enyere anyị aka dịka ha nwere ike, n’otu n’otu.
Mana anyị kwenyere na Africa anaghị enyere anyị aka zuru oke. Anyị nwere echiche na Africa nwere ike inyere anyị aka karịa, ma ọ bụrụ na Africa jisie ike ghọta uru na mkpa ọ dị ọgụ anyị megide Portuguese colonialism anyị nwere olile anya, na dabere na ahụmịhe nke afọ abụọ kemgbe Addis Ababa, nzukọ nzukọ nke ọzọ nke ndị isi ala Africa ga-eme ihe doro anya iji wusie ike enyemaka Africa nyere ndị agha na Guinea, Cape Verde, agwaetiti San Thorné, Mozambique na Angola. N'aka nke ọzọ, ndị enyi anyị n 'ụwa niile, ọkachasị ndị enyi anyị na mba ndị na-elekọta mmadụ, maara n'ezie na mmepe nke mgba anyị na-egosi mmepe nke enyemaka nke nwanne ha.
Anyị kwenyesiri ike na, kwa ụbọchị, ike nke mba ndị na-elekọta mmadụ na ndị na-enwe ọganihu nke West ga-amata otu esi azụlite enyemaka ha, nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị, omume na ihe onwunwe ha maka mgba anyị, nkwekọrịta ya na mmepe nke ikpeazụ a. M ga-ejedebe okwu ndị a: n'ụlọ, na-akpọ Portuguese Guinea na Cape Verde Islands, ndị agha colonialist na-agbada kwa ụbọchị. Taa ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlụ ọgụ megide ndị agha colonial, anyị ga-aga n'ụlọ ha ma lụọ ọgụ, n'ime ogige ahụ. Mana anyị ga-aga n'ihi na anyị ga-akwụsị Portuguese colonialism n'ụlọ. Anyị ji n'aka, ezigbo ndị enyi na ndị enyi, na n'oge na-adịghị anya na Mozambique ọ ga-abụ otu ihe ahụ. Na nke a amaliteworị ime na mpaghara ụfọdụ. Na Angola ọ ga-abụ otu. Ma nke a amalitelarị ime na Cabinda. Ndị Portuguese colonial na-amalite ịtụ egwu anyị. Ha na-eche ugbu a na ha efuola mana ana m ekwe gị nkwa na ọ bụrụ na ha nọ ebe a, ọ bụ ihe nwute na ha enweghị ndị ọrụ ebe a n'ihi na ọ bụrụ na ha nọ ebe a, na-ahụ anyị, na-anụ ihe niile ndị nnọchianya ahụ, na-ahụ enyemaka a, na-ahụ nnabata nwanne si gọọmentị Tanzania nyere anyị, egwu ndị Portuguese colonialists ga-akarị nke ukwuu. Ma, ndị enyi m na ụmụnna, ka anyị gaa n'ihu, ogwe aka na aka, ebe ọ bụla enwere ndị ọchịchị Portuguese. Ka anyị gaa n’ihu, bibie ya ma gbapụta mba anyị ọsọ ọsọ site na ike agaghagoro ike ọchịchị Portuguese. Mana ka anyi dozie onwe anyi kwa ubochi, na nche, ka anyi ghara ikwe ka usoro ochichi ohuru biri na obodo anyi, ka anyi ghara ikwe ka ndi ochichi obula bia na obodo anyi, ka anyi ghara ikwe ka neocolonialism, nke ebidola ịghọ ọrịa kansa na akụkụ ụwa na n'Africa, na ọrịa kansa a erughị ala anyị.
Ogologo oge anyị na-agbasi mgba ike mba!
Ogologo ndụ ndị mmadụ na-eme maka nnwere onwe mba nke mba anyị!
Ogologo ndụ dịrị ndụ na-arụsi ọrụ ike nke ndị mmadụ dị iche iche nke Africa na nke mba ndị na-elekọta mmadụ na nke ike niile na-aga n'ihu n'ụwa na mgba anyị!
Na alaeze ukwu, colonialism na neocolonialism!
Lee, okwu nzuzo nke Jizọs zoro
Magnesium chloride ọgwụgwọ dị irè megide Ebola?
Naijiria Na-emepụta Mkpụrụ Ọkụ, Ngwakọta Ngwakọta na Nweghachi Ihe Ụlọ Ọrụ
Kekọrịta edemede gị